Fetin’ny faran’ny taona : polisy 4 000 niasa, jiolahy efatra voasambotra | NewsMada
Fetin’ny faran’ny taona : polisy 4 000 niasa, jiolahy efatra voasambotra
Nilamindamina amin’ny ankapobeny ny fety teto an-drenivohitra. Nanao ny asany ny polisy, nisy ny voasambotra. Nihena ihany koa ny olona nentina teny amin’ny hopitaly…
Araka ny efa nambaran’ny polisim-pirenena, polisy maherin’ny 4.000 no nahetsika niasa, nisahana ny fitandroana ny filaminana teto an-dRenivohitra nandritra ny fetin’ny faran’ny taona teo. Ankoatra izay, nidina ifotony mihitsy ny talen’ny jeneralin’ny polisy sy ny mpiara-miasa aminy, nanao ny fisafoana ireo polisy am-perinasa teto an-dRenivohitra ary nitety faritra maro, toy ny teny Mahamasina, 67 ha sns, izy ireo. Tazana teny rehetra teny ireo hery vonjitaitra ny polisy toy ny UIR nanao ny asany.
Natevina, araka izany, ny fisafoana teto an-dRenivohitra, tamin’ireo faritra be olona, sy ny fokontany rehetra. Efa-dahy voasambotry ny polisy teny amin’ny boriborintany fahadimy ny alin’ny 31 desambra teo, izay voalaza fa mpanendaka. Teo am-panaovana ny asa ratsiny mihitsy izy ireo no tratra ny polisy, ary naondrana tanaty 4×4 nentina teny amin’ny paositry ny polisy.
Niezaka teo amin’ny fandaminana ny fifamoivoizana ihany koa ny polisy, teo amin’ny fisorohana ny fitohanana sy ny hampianarana ny olona amin’ny fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Na izany aza, nisy hatrany ny lozam-pifamoivoizana nitranga teto an-drenivohitra sy ny manodidina, ka nahatratra 32 ny niditra tao amin’ny HJRA ny faran’ny taona sy omaly voalohan’ny taona. Olona 26 voatery naiditra hopitaly tamin’ireo naratra ny lozam-pifamoivoizana.
Nihena ny teny amin’ny hopitaly
Amin’ny ankapobeny, nihena ny olona nentina teny amin’ny hopitaly raha nitaha ny tamin’ny taon-dasa. 131 ny isan’ny nentina teny amin’ ny HJRA nandritra ny 31 desambra, raha 85 omaly. 31 nentina tao amin’ny “urgence chirurgicale”, nandalo fitiliana ny 77 ka ny 18, naiditra hopitaly. 22 ny naratra vokatry ny ady ary 32 ireo naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana.
Olona 10 kosa nentina tao amin’ny “reamed” ka lehilahy ny enina, vehivavy ny telo ary ankizy 13 taona ny iray. Olona enina narary vokatry ny fisotroan-toaka, nisy olona roa kosa tapaka lalandra. Olona iray narary vokatry ny fihinanana sakafo, tsy nisy ny namono tena. Voalaza fa nisy razana iray niditra teny amin’ny HJRA nandritra ny fety.